*OKUSHA* Ikhabethe Lamalogi w/I-Sunset View - Eduze ne-Grand Canyon!
Williams, Arizona, i-United States
Ikhabethe elihle lamalogi endaweni eyihektare eyi-1 etholakala kalula nje imizuzu eyi-15 ukusuka edolobheni laseWilliams imizuzu engama-45 ukusuka ekungeneni kweGrand Canyon. Buka ukushona kwelanga kuvulandi futhi uthole ukuphumula nokuphumula okudingekile. Ikhabethe liyindawo ekahle yokubaleka egcwele i-rustic charm!
Leli yikhabethe lamalogi elingu-800 sq ft endaweni enhle eyi-1 acre. Kunendathane yesikhala esivulekile! Igceke elingemuva linendawo yomlilo futhi ikhabethe linompheme omkhulu ongawujabulela.
Ikhishi - Ikhishi lifakwe izinto ezibalulekile njengamabhodwe/amapani, izitsha, amafutha omnqumo, usawoti kanye nopelepele nezitsha. Kunefriji encane ngaphansi kwekhawunta etholakalayo ongayisebenzisa. Siphinde sinikeze ikhofi, itiye kanye noshokoledi oshisayo!
Igumbi lokuhlala - Ikhabhinethi ine-Wifi. Sihlinzeka nge-Netflix, i-HBO ne-Disney+ ukuze usebenzise kukho konke ukuhlala kwakho.
Amakamelo okulala - Kunamakamelo okulala amabili anemibhede eyindlovukazi, omatilasi be-memory foam, nemicamelo ethokomele. Sikunikeza noma yimaphi amalineni, amathawula nezingubo zokulala ozidingayo ukuze uhlale!
Igumbi lokugezela - Kukhona igumbi lokugezela eligcwele eline-shampoo, i-conditioner, nokugeza umzimba. Ukonga amanzi, ishawa inekhanda leshawa eligeleza eliphansi. Kukhona amanzi ashisayo eshawa uma ekusethweni okugeleza okuphansi, kodwa ngeke akwazi ukushisisa amanzi okugeza.
Ikhabhinethi alinayo i-air conditioning
SICELA UQAPHELE: Kumelwe ukwazi ukukhuphuka izitebhisi ezi-4 ukuze ungene ekhabetheni. Imililo ayivunyelwe uma kukhona ukuvinjelwa komlilo esifundeni. Njengamanje sisesigabeni sesi-2 semikhawulo yomlilo njengoba ingozi yomlilo idlulele. AKUKHO MILILO evunyelwe ngalesi sikhathi
Ungabuka izitimela zePolar Express kanye neGrand Canyon Railroad zidlula kuvulandi ongemuva! Ikhabhinethi itholakala ngqo ku-AZ-64 emgwaqeni owubhuqu onakekelwa kahle ofinyeleleka nganoma iyiphi imoto.
Kukhona omakhelwane eduze
Sizotholakala ngengxoxo noma ngocingo kukho konke ukuhlala kwakho. Sicela ungangabazi ukuxhumana nathi uma unemibuzo!